मुलुकको एकमात्र ढोरपाटन शिकार आरक्षमा भेँडाको मुल्यमा नाउर र झारलको शिकार ! – ebaglung.com
मुलुकको एकमात्र ढोरपाटन शिकार आरक्षमा भेँडाको मुल्यमा नाउर र झारलको शिकार !
२०७६ आश्विन १९, आईतवार ०९:०५	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
ढोरपाटन २०७६ असोज १९ । मुलुकको एकमात्र शिकार आरक्ष कार्यालय ढोरपाटनमा वर्षको दुई पटक (याम)मा शिकार अनुमति दिईने गर्छ । पहिलो फागुन-बैशाख र अर्को असोज-मंसिर ढोरपाटन शिकार आरक्षमा विदेशी शिकारी टोलीहरुलाई ढोरपाटन शिकार आरक्षमा नाउर र झारलको शिकार अनुमती दिईने गर्छ ।
यस याममा ढोरपाटन शिकार आरक्षमा नाउर र झारल गरी एक दर्जन बन्यजन्तुको शिकार गर्ने अनुमति दिईएको विभाले जनाएको छ । यस अघिको फागुन बैशाख शिकार मौसमको तुलनामा यस याममा नाउर र झारलको शिकार गरेबापतको राजश्व एक दमै न्यूनतम भएकोले स्थानीयले भेँडाको मुल्यमा नाउर र झारलको शिकार भनेर टिप्पणी गरेका छन् । गत फागुन-बैशाखमा एउटा नाउरको शिकार गरेबापत राजश्व १३ लाख ५१ हजार र झारल शिकारको १३ लाख ५० हजार थियो । शिकार कम्पनीले एउटा नाउर शिकारको १ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजश्व तिरेका छन् । जबकि एउटा झारल शिकार गरेको मुल्य त्यो भन्दापनि कम छ ।
ढोरपाटन शिकार आरक्षमा यस सिजनमा एक दर्जन बन्यजन्तुको शिकार गर्न अनुमती प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार यस सिजनमा ७ नाउर र ५ झारलको शिकार अनुमती दिईएको छ ।
विभागले अघिल्लो महिना शिकारका लागि पेशेवर शिकारी अनुज्ञापत्र प्राप्त कम्पनीबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको थियो । १० नाउर र ६ झारलको कोटा रहे पनि शिकारको माग कम आएको जनाएको छ । शिकार कम्पनीबीच विद्युतीय बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा नभएपछि यसपालि राजश्व दर पनि घटेको छ ।
शिकारको माग बढी हुँदा राजश्वको दर पनि बढ्ने र माग घट्दा राजश्व पनि घट्ने हुन्छ । शिकारका लागि रुस, अमेरिका, क्यानाडा, नर्वे, जर्मनीलगायत देशबाट तालिमप्राप्त शिकारी ढोरपाटन आउने गरेका छन् ।